Madaxweyne Waare oo la kulmay Madaxweyne-yaashii hore ee dalka | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Waare oo la kulmay Madaxweyne-yaashii hore ee dalka
Madaxweyne Waare oo la kulmay Madaxweyne-yaashii hore ee dalka
Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare o o tan iyo Isniintii ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa gelinkii dambe ee maanta kula kulmay Madaxweyne-yaashii hore ee dalka, Cali Mahdi Maxamed, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay inay sharaf weyn u tahay la kulanka Madaxweyne-yaashii hore ee dalka, kuwaa oo sida uu sheegay deegaan ahaan ka soo jeeda Hirshabelle.
“Waxaa sharaf weyn ii ah inaan la kulmay Madaxweyne-yaashii Hore ee dalka, Cali Mahdi, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, oo dhammaantood deegaankooda iyo doorashadoodu tahay HirShabelle.” Ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabelle.
Madaxweynaha ayaan faah faahin ka bixin waxa kulanka looga hadlay, balse taasi bedelkeeda waxaa uu sheegay in uu waaya-aragnimo ka soo faa’iiday la kulankooda.
“Wax badan oo waaya-aragnimo ah ayaan ka soo faa’iday.” Ayuu yiri Madaxweyne Waare oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Qoraal lagu daabacay barta Madaxtooyada Hirshabelle ku leedahay Fcebook ayaa lagu yiri “Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa Magaalada Muqdisho Kula Kulmay Madaxweyne-yaashii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Mudane Shariif Sheekh Axmed iyo Mudane Cali Mahdi Maxamed, iyagoo iska xog wareystay arrimo kale duwan oo la xiriira xaaladda dalka, gaar ahaan Hirshabelle, waxaana Kulanka uu ka dhacay Guriga Madaxweyne Cali Mahdi Maxamed.”
“Kulanka intii uu socday ayaa looga hadlay muhiimadda in la iska kaashado horumarinta Hirshabelle, waxaana Madaxweyne-yaashii hore ay ku ammaaneen Madaxweyne Waare Doorka uu ka qaatay shirkii wadatashiga Dhuusamareeb, oo ay ku kulmeen Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah ee Somaliya.”